China Aluminium tontonana-YA103 mpanamboatra sy mpamatsy | Yingjiwei
Endri-javatra ny tontonana aluminium
3. Ny aluminium dia malemy ary manana teboka miempo ambany, mamela antsika hamorona takelaka aliminioma mora foana amin'ny fepetra takian'ny tetikasa. Izy io dia azo zahana amin'ny endrika sarotra toy ny endriny
6. Mora apetraka. Ny tontolon'ny rindrina ambainy aluminium dia namboarina tao amin'ny ozinina ary namboarina tamin'ny rafitra nefa tsy nanapaka teo amin'ny toeram-pananganana.
Ny tontonana aluminium dia matetika misy panne, hamafis, zoro aluminium ary singa hafa. Izy io dia karazan-java-haingo fananganana trano, izay mampiasa lovia firaka aliminioma avo lenta ho toy ny akora fototra, ary avy eo miroso amin'ny hatevin'ny namboarina, ny habeny ary ny endrika manasarotra miaraka amin'ny fitsaboana samihafa eny ambonin'ny tany, ny firakotra fluorocarbon no safidy lehibe indrindra. Ny fizotran'ny hosodoko amin'ny ankapobeny dia mizara ho takelaka roa sosona, firakotra telo na firakotra efatra. Fluorocarbon coating manana fanoherana tsara harafesina sy fanoherana ny toetr'andro, mahazaka orana asidra, famafazana sira ary loto isan-karazany amin'ny rivotra, fanoherana ny hatsiaka sy ny hafanana mahery vaika, afaka manohitra ny taratra ultraviolet mahery, afaka mitazona maharitra tsy maharitra, tsy vovoka, androm-piainana maharitra.
Anaran'ny vokatra Tontonana aluminium
Fitsaboana ambonin'ny tany Famonoana PVDF / Famonoana vovoka / fanontana anodized / UV, fanodinana
Color Ny loko RAL rehetra, ny loko matevina, ny loko metaly, ny voan-kazo, ny marbra sy ny manahaka azy
hateviny 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm
Manaraka: Panel voaravaka-YA313